Ra’iisul wasaare Kheyre oo haatan lasoo baxay dar-dar xoogan iyo cadaadis soo koray wasiiradda – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo haatan lasoo baxay dar-dar xoogan iyo cadaadis soo koray wasiiradda
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa haatan lasoo baxay dardar xoogan oo ka gadisan howlihii ay hore u qaban jireen ra’iisul wasaareyaashii dalka hore usoo maray.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa lasoo baxay xisaabtan joogto ah oo uu ku sameeynayo wasiirada iyo kormeero aan kala joogsi laheyn uu ku tagaayo xarumaha wasaaradaha, taasoo isbedel weyn ku keeni doonta shaqadii ay wasaaradaha qaban jireen.
Wasiir kasta oo ka mid ah xukuumadda ra’iisul wasaare Kheyre waxaa laga rabaa in maalin kasta uu xafiiskiisa ku sugnaado in ka badan 8 saacadood, islamarkaana shirarka golaha wasiirada uu iska soo xaadiriyo saacadda loo qabtay, iyadoo laga joojiyay inuu ku lug yeesho kharash mushaarkiisa ka badan.
Ra’iisul wasaare Kheyre ayaa la sheegay inuu maalmaha Sabtida iyo Axadda ee todobaad kasta la fariisan doonno wasiirada, isagoo mid mid uga dhageysan doonno waxa ay qabteen iyo howlaha horyaalla.
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer C/raxmaan Cumar Cismaan “Yariisoow” oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in hadafka laga leeyahay qorshahaan cusub uu yahay sidii loo dar-dar gelin lahaa howlaha laga rabo xukuumada Soomaaliya.
Arrintaan ayaa culeys weyn ku noqon doonto wasiiro badan oo hore xil usoo qabtay, kuwaas oo aan hore u arag wax xisaabtan ah iyo kormeer ah, waxaana wasiirada qaarkood ay arrinkaan u arkaan xaaladda cusub oo ay galeen, iyagoona shaki ka muujiyay inay sidaan kusii shaqeyn karaan.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa la sheegay inta uu xilka haayay inuusan weligiis kormeer ku tagin xarun wasaaradeed ama uu sameeyay la xisaabtan wasiireed, waxayna arrintaasi keentay in hanti badan la lunsado.